Russie 2018 : Raikitra ny korontana tany Frantsa -
AccueilVaovao SamihafaRussie 2018 : Raikitra ny korontana tany Frantsa
Russie 2018 : Raikitra ny korontana tany Frantsa
12/07/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Miditra amin’ny dingana farany. Taorian’ny nandreseny ny devoly menan’i Belzika, dia hiatrika ny lalao famaranana amin’ny fiadiana ny amboara eran-tany eo amin’ny baolina kitra atao any Russie ny ekipam-pirenena Frantsay. Tany Frantsa dia horakora-pifaliana no nandraisan’ireo mpomba ny ekipa frantsay ny vaovao, ary maherin’ny 20 000 ireo nijery ny fahitalavitra goavana teo anoloan’ny lapan’ny tanàna tao Paris. Nihira ny hiram-pirenena Frantsay izy ireo taorian’ny fiafaran’ny lalao.
Noho izay hafaliana izay, dia raikitra ny korontana tany Frantsa. Araka ny tatitry avy amin’ny mpitandro filaminana dia olona 49 no nanaovana fanadihadiana taorian’iny lalao iny. 7 izany raha tao amin’ny prefektioran’i Paris, ary ny fanipazana zava-nipoaka tamin’ny faritr’i Champs-Elysées no nanaovana fanadihadiana azy ireo. Tetsy ankilan’izay dia polisy 9 no naratra manerana an’i Frantsa. Fahasimban-javatra sy toraka zava-mirehitra ihany koa ny hitan’ireo zandary, indrindra tany amin’ny faritr’i Oise
Omaly tolakandro dia niala ny trano fandraisam-bahiny nisy azy tany Saint-Petersbourg ny Frantsay, ary nihazo avy hatrany ny toeram-panaovana fanazaran-tena any Istra, mba hanomanana ny lalao famaranana ny alahady izao any Moscou. Nihoby ireto ekipam-pirenena frantsay ireto ireo mpomba azy noho ny fandresena azony noho ny baolina matin’i Samuel Umtiti.
Fery goavana tena nandoaka ny toekarena malagasy no takaitra navelan’ilay fanonganam-panjakana nataon-dRajoelina Andry , valo taona lasa izay. Mitsingerina tokoa mantsy ny datin’ny 17 Marsa 2009, izay nampidoboka an’i Madagasikara tany anaty lavaky ny tsy ...Tohiny
Faha-59 taonan’ny Filoham-pirenena : Nisesy ny firariantsoa tetsy Iavoloha